Nhasi, mazita anozivikanwa emhando ari pamiromo yemunhu wese. Isu tinojaira ivo uye hatifunge kuti mumwe munhu akambogadzira aya mazita, kuti ivo vari kumashure kwavo ...
Ronald McDonald - Mascot aMcDonald
Ronald McDonald ndiani? Uyu mutambi uyo ari mascot wekambani inozivikanwa yeMcDonald. Zvinoenderana nekutsvaga kwakaitwa mu2001 nevanyori vebhuku "Fast Food Nation", Ronald McDonald (ona pikicha pazasi) iri ...
Zuva rega rega vanhu vanopedza maawa akati wandei paInternet kugadzirisa basa ravo uye nenyaya dzehupenyu. Vateereri vari kuramba vachikura, zvese zvakawandisa uye zvine hunhu: vachiri kuyaruka, vechidiki, vanhu vakuru vane mari zhinji ...
Iwe unogara uchida kumira kubva muboka revanhu. Zvisinei nemwaka uye mamiriro ekunze kunze kwehwindo, pane chishuwo chekutaridzika. Panguva imwecheteyo, ini ndoda mbatya uye zvishongedzo kwete chete kuva ...
Dhizaini ndeimwe yeanonyanya kufarirwa maindasitiri munyika medu. Ndiani anongozvidaidza kuti ivo vagadziri: kubva kune vanogadzira webhusaiti vanogadzira kune zvakajairika manicure masters. Nekudaro, iyo yakanyanya ...
Kuuya kwetekinoroji nyowani yekudhinda kunogonesa mhando yemaprints uye kunowedzera kukura kwavo kwekushandisa Pakati pavo, sublimation kudhinda inomira, musimboti wekushandisa mufananidzo kune zvigadzirwa kubva ...
All novice server maneja nekukurumidza kana kuti gare gare vanotanga kufarira mubvunzo: "Sei kusimudzira iyo GTA server: SAMP?" PR yeSAMP server inogona kuve yakakamurwa kuita maviri marudzi. Yekutanga, ndiyo yakapusa, - ...
Nzira yekugadzira poster mu Photoshop kana kuzviita iwe pachako? Ndeipi nzira yaunofanira kushandisa? Tichakurukura zvese sarudzo zvakadzama, uye ipapo munhu wese anogona kusarudza iyo inomukodzera. Nzira yekugadzira poster mu Photoshop Kazhinji ...
Nhasi zvakaoma kufamba mumugwagwa uye kunzvenga kupihwa kwekutora nekapepa keruzivo kubva mumaoko emunhu akamira padyo nemetro. Zvakava zvakajairika - kudzokera kumba, semuenzaniso, ne ...
Iwe unofanirwa kubvuma kuti munyika yemhando kune mashoma kwazvo marogo ayo munhu wese anoaziva, anoziva nekuda kwemavara kushambadzira kweTV kana mavara anekushambadzira maposita akarembera mumigwagwa yeguta. Nhoroondo ye "logo" yakatanga sei ...
Paunenge uchironga kuratidzira kana yemamiriro ekushambadzira mushambadziro pamambure, chero mushambadzi anofungidzira ayo anofungidzirwa bhajeti. Izvo zvakakosha kune mutengi wemushandirapamwe wekushambadzira kuti aone kuti mari yekushandisa kwayo inogovaniswa sei, kunyangwe ichishandiswa zvinoenderana nechinangwa chavo ...
Flaya ndeimwe yenzira dzisingadhuri uye dzinoshanda kwazvo dzekusimudzira chigadzirwa kana sevhisi. Inoita zvese kushambadza uye ruzivo ruzivo kune mutengi. Uye kana paine chikonzero chekusimudzira ...
Kana iwe ukatarisa padyo, kune akawanda akasiyana akasiyana mavara mavara kushambadzira kutenderera. Iyo yakaiswa pazvivakwa, zvikwangwani, mahwindo emahofisi nemakamuri, uye vamwe vanoimisa yakananga pamahwindo emota. Izvo zvese zvinoenderana ...
Basa rekambani chero ripi zvaro rinotanga nekugadzirwa kwehukambani kuzivikanwa, izvo zvinhu zvikuru zvinosanganisira kuvandudzwa kwechiratidzo. Ichi chiratidzo chinoratidza kuve kwechigadzirwa kana sevhisi kune rimwe bhizinesi, inoratidza pfungwa yacho uye ...
Kuti ubudirire kusimudzira bhizinesi rako, ringave rekushambadzira, akasiyana masevhisi kana chimwewo chinhu, iwe unofanirwa kutanga wasimudzira, chiite kuti chizivikanwe. Uye kushambadzira kunoita basa rakakura mune iyi nyaya. Yaiva iye ...
Kushambadza kwave chinhu chakakosha chehupenyu hwezuva nezuva mazuva ano. Anotiperekedza kwese kwese: munzira yekuenda kubasa, kana uchifamba-famba neguta, mukutakura, paTV skrini. Imwe yemhando dzekushambadzira, ...
Izwi rekuti 'promo'
Chivakamberi "promo" ikozvino yakasimbiswa muhupenyu hwezuva nezuva hwemunhu wemazuva ano. Kubva kumativi ese isu tinogara tichinzwa "promo-chiito", "promo-mbatya", "promo-saiti", "promo-zviyeuchidzo", "promo-mavhidhiyo", "promo-makodhi" - runyorwa urwu haruperi. ...
Kupeta - chii icho? Mamwe ruzivo
Pfungwa ye "kupeta" inotangira mumutauro wechiGerman, izwi rekuti "peta" mududziro rinoreva "groove", "groove". Pfungwa iyi yakadzika midzi mumutauro wedu pasina shanduko. Kupeta kunoshandiswa mukugadzira kwemashizha zvinyorwa, semuenzaniso, tumabhuku, ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,539 masekondi.